Ciidamada Galmudug oo saakay xiray wadooyinka soo gala degmada Guriceel – XAMAR POST
By Zakariye iiman On May 24, 2019
Ciidamada Ammaanka Dowlad goboleedka Galmudug ayaa saakay waxa ay howlgallo ka wadaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud,halkaas oo shalay lagu qabtay Nin doonayay in uu isku qarxiyo goob ay munaasabad ka socotay.
Ciidamada Galmudug oo wata Gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkayaa wadooyinka soo gala degmada Guriceel,iyaga oo howlgallo baaritaan ah ka wada,sida ay soo sheegayaan wariyeyaal ku sugan degmadaas.
Wararka kale ee la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Galmudug ay ilaa 5 ruux oo kale u qabteen qarixii shalay ay Ciidamada ka hortageen dadkaas oo lagu tuhmayo inay abaabuleen qaraxa,sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan Ciidamada Galmudug.
Degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ayaa Maanta ka duwan sidii hore,waxaana la arkayaa Ciidamada oo meel walba taagan,isla markaana howlgallo baaritaano ah sameynay,waxaana meelaha qaar la sheegay inay u diidayaan inay Gaadiidka isticmaalaan.
Akhriso:-Taariikh Nololeedka Gudoomiye ku-xigeenka Cusub ee Maamulka G/Banaadir